Xildhibaanimadu xalaal iyo xoog midna kuma xuma!!
Home » Qormooyinka » Xildhibaanimadu xalaal iyo xoog midna kuma xuma!!	Xildhibaanimadu xalaal iyo xoog midna kuma xuma!!
25/12/2016	837 Views Soomaaliya sida badan waxaa la cabsiiyay suntii qabyaaladda, Nebi Muxamada ( SCW ) wuxuu yiri qabyaaladda ka taga waa Qurune. Abwaankii Soomaaliyeed marxuum Cabdulqaadir Xirsi Yamyan wuxuu yiri, Qabiil waa laba erey oo is cuneysa oo kala ah; Qab oo macnaheedu yahay Kibir iyo iil oo macnahdeedu yahay Qabri.
Suntii qabyaaladda waxy dhex gashay siyaasiyiintii dalka doorashadii 1964tii sida la sheegay waxaa lagu dilay wiil Aabihii Wakiil uga ahaa Goobta Doorashadda waxaana dhacadey in wiilkii Goobta lagu diley ka dib waxaa . Aabihii loo sheegay in wiilkiisii la dilay, wuxuu yiri “WIIL WAA DHALAAHE KURSIGII MA HELAY”.
Sanadkii 1969kii xukunka dalka waxaa la wareegay saraakiil u ooman hoggaaminta siyaasadda dalka, sida la og yahay 25kii golaha sare kacaanka laba xubin oo ka mid ah waxaa lagu toogtay dugsiga sare booliska iyagoo lagu eedeeyaya in a ysiyaasadii lagu heshiiya ku caasiyeen.
Sanadkii 1991dii waxaa dig soo yiri ururo hubeysan oo careysan oo aan fariin lahayn oo isbarbar yaacaya oo sheegtay in xaq ka maqan yahay. Ururadii orodka badnaa dalkii waa dumiyeen, dadkii waa laayeen, siyaasadiina waa ku wareereen.
Sanadii 2000 waxaa dalka Jabuuti ku shiray laba kun oo aqoonyahan oo suntii qabyaaladda cabsan, waxay soo saareen xeerkii xaaraanta ahaa ee (4.5 ) oo macnaheedu ahaa Soomaali waa kala sareysaa, mid waa addoon mid waa Ugaas, mud waa buuxaa midna waa nus. Suntii qabyaaladda waxay soo saartay saddex dowlo oo KMG ah oo lagu soo xulay xeerkii ( 4.5 ) waxaa si qaawad oo qabyaaladii ka muuqato loo qeybsaday xildhibaanadii baarlamaanka, waxaa si sariig la’aan ah loo qoray 61 xildhibaan beesha Hawiye, 61 xildhibaan beesha Daarood, 61 xildhibaan beesha Direed, 61 xildhibaan beesha Digil iyo Mirifle, 31 xilhdibaan beesha looma ooyaan looma aaraan.
Sanadkii 2006 waxaa yimid culimaa’udiin ku doodaya in ay qabyaaladda Tirtirayaan Dalkana Diinta Islaamka ku Xukumi doonaan Waxay muddo lix bilood dalkii iyo dadkii ay ku soo celiyeen dowladnimo islaami ah oo aad loogu diirsaaday, hase yeeshee waxaa ka hoos dhshay duul waalan oo siyaas doon ah oo isugu jiray ciidamo ajnabi ah iyo kooxo urur diimeed tira badan magacya badan oo isku laayay anaa dalkaan iyo dadkan hoggaminaya, anaa saxan,adaa qaldan.
2012 waxaa fak soo yiri xeerkii loo bixiyay (Roadmap ) oo tala dalka gacanta loo geliyay 7 xubnood. Waxay soo saareen xeerkii loo bixiyay Federaalka oo aan loo codeyn oo far iyo suul shacbiga dhuuntiisa lagu riday, lagana keenay waxaan dooneynaa dowlad federal ah maxaa wacay waxaan dooneynaa in xukunka hoos loo dhaadhciyo oo la gaarsiiyo gobolada, degmooyinka, tuulooyinka iyo xaafadaha.
Fooshii federaalka waxaa laga faa’iday in lagu dhwaaqo doorasho dadban oo dunida la aqoonin balse uu dhalay qabkii qabyaaladda, waxaa xilka gacanta loo geliyay 7 xubnood oo loo bixiyay hoggaan madasha wada tashiga.
Waxay faafiyeen suntii qabyaaladda oo shaar loo geliyay oo loo bixiyay dowlad federal. Waxay dhashay in lix dowlad goboleed abuuranto sida D.G. Puntland, D.G, Jubbaland, D.G, Koonfur Galbeed, D.G, Galmudug, D.G, Hirshabeelle iyadoo gobolkii banaadir oo la degganaa oo deeqdu dhex tiilay oo dadka koriyo deegaana lagu leeyahay dadkii degganaa dowlad goboleed gobolka Banaadir in loo diido.
Dulmigii wuxuu dhalay in leysku dilo xilalka aqalka Sare ( Senators ) oo ummadda ku cusub oo aan la garaneyn waxay qaban doonaan iyo aqalka hoose ( Golaha Shacbiga ) oo lagu soo dooran doono nidaamkii ( 4.5 ) oo shaati kale loo geliyay.
Waxay dhashay in doorashadii leysku dilo oo la baxsho laaluulsh oo dadkii qabyaaladda ku heshiiyay ay kala fogaadeen oo midba midka kale xadgudub xad dhaaf ah la baadi goobayo. Siyaasadii Soomaaliya waxay noqotay siyaasadii Geeleyda oo kale oo ahayd ( GEELU XALAAL IYO XOOG HADDU XERO GALA MIDNA KUMA XUMA ) taasoo hadda noqotay xildhibaanku xalaal iyo xoog hadduu xafiiska fariisto midna kuma xuma.
Shacbiga Soomaaliyeed waxaa lagu wareeriyay xirfadda kaliya ee dalka ka jirto oo xil iyo xoolo lagu heli karo inay tahay siyaasadda. Sidaa awgeed dadwnaha Soomaaliyeed waxaa loogu baaqay inay siyaasadda Xirfad ka dhigan oo aysan naf iyo maal ku baxin ( Xildhibaanow Xaal Qaado).
Qoraa Axmed Maxamuud Dhicisow
Previous: Ganacsade caan ah oo markii ugu horeysay Muqdisho uga dhawaaqay inuu yahay musharax Madaxweyne + Sawirro
Next: FIIRSO SAWIRO: Musharax Dr.Siciid Cabdullaahi Deni oo la kulmay Bulshada ku nool Magaalada Muqdisho